Ikhabhana entle eTermas de Chillán
Uyafuna ukulala umamele isandi somlambo? Ukuba abantwana bakho baphila ngamava okufumanisa indalo ngelixa besakha iinkumbulo zosapho? Ukubaleka kwezothando mhlawumbi?
ICabañas del Valle, esemazantsi eeNtaba zeAndes kunye nemizuzu nje eli-15 ukusuka kumbindi weSki Termas de Chillán, inegumbi lokuhlambela le-rustic, elinefanitshala epheleleyo kwaye lixhotyiswe ngokupheleleyo.
Indawo eqhelekileyo ibonelela ngedama lokuqubha kunye nemidlalo efana neziliphu, ujingi, ibala lebhola ekhatywayo kunye netrampoline. Kukwakho nebhafu eshushu ejonge ihlathi lemveli (intlawulo encinci eyongezelelweyo) kunye nezibonelelo zebarbecue.
Iindawo ezingqongileyo zibonelela ngokunyuka iintaba ezinamatye kunye neengxangxasi; amachibi ashushu, ukukhwela amahashe, i-canopy, ukubukela iintaka, ukuloba. Ngaba unokucela enye into? Ewe!
Ngexesha lasebusika unokutyibilika, ukukhwela ikhephu, ukonwabele iibhafu ezishushu, ukukhwela inja ngesileyi, ukukhwela inqwelo-mafutha ekhephini, phakathi kwezinye izinto ezenziwa liziko lokutyibiliza eliseTermas de Chillán.
Imizuzu eli-15 kude neenkundla zokutyibiliza.
Kufuphi neendawo zokutyela kunye nee-pubs.
Kwiindawo ezingqongileyo kukho i-canopy kunye nokukhwela amahashe.
Izindlu zijikelezwe yindawo yendalo emangalisayo.
Ngaba kukho into oyifunayo? Ungaqhagamshelana nathi malunga nento oyifunayo!
Sifuna ukuhlala kwakho kungalibaleki.